R/Wasaare Saacid oo maanta markii ugu horeesay u socdaalay mid kamid ah Dalalka Yurub(Daawo Sawirada)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka ka ambabaxay magaalada Muqdisho, iyaga oo ku sii jeeda magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Sidoo kale, shirka ayaa waxaa ka qeybgali doona Wasiirka Horumarinta adeega Bulshada Drs. Maryann Qaasim Axmad iyo safiirka dalka Switzerland u fadhiya dawladda Soomaaliya Mudane Amb. Yuusuf Ismaaciil (Bari-bari).
Marka uu soo idlaado shirkaasi, ayuu u soo gudbi doonaa Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa dalka Turkiga, halkaasoo ay kulamo kula qaadan doonaan madaxda dalkaasi, waxaana looga hadli doonaa kulamadaasi horumarinta iskaashiga labada wadan ee Soomaaliya iyo Turkiga, waxaana sidoo kale la filayaa inuu la kulmo jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi oo u badan arday
Amb.Maxamed Cali Nuur Ameeriko "Al-Shabaab waxaa u badan dagaalyahano Ajaaniib, waa in Kenya iyo Somalia is kaashadaan"
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Amb. Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa cambaareeyay weerarkii shalay lagu qaaday Xarunta Ganacsiga Westgate oo ku taala bartamaha magaalada Nairobi, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo hada sodon iyo sagaal ruux.
Amb. Ameerika oo la hadlay Telefishinada laga leeyahay Kenya ayaa sheegay inuu uga tacsiyadeynayo shacabka iyo dowladda Kenya dhibaatada soo gaartay.
Mr Ameeriko ayaa sheegay in Al-Shabaab ay u badan yihiin dagaalyahano ajaaniib ah oo ka kala yimid dunida daafaheeda.
"Al-Shabaab waxaa u badan dagaalyahano ajaaniib ah oo ka kala yimid dunida, waa in Somalia iyo Kenya iska kaashadaan sidii loola dagaalami lahaa"ayuu yiri Amb. Ameeriko.
Safiir Ameeriko ayaa sidoo kale sheegay in dadkii ku dhintay weerarkii Westgate uu ku jiro Wiil Soomaali lagu magacaabo Yasin Hirsi, kaasoo ka shaqeynayay Hey'adda IIDA.
Al-Shabaab oo goor sii horeysay sheegtay weerarka Westgate ayaa xaqiijisay in dagaalyahanada ku jira dhismahaas ay bad qabaan, ayna la dagaalamayaan Ciidamada Kenya.
Wali waxaa socda howl galka, iyadoo ciidamada Kenya ay la hardamayaan dableyda hubeysan ee ku jira gudaha dhismaha, kuwaasoo heysta dad la heystayaal ah.
Ra’iisul Wasaaraha Somalia oo qadka telefoonka uga tacsiyadeeyey Madaxweynaha Kenya.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), ayaa si adag u cambaareeyey falkii argagixiso ee ka dhacay suuq laga dukaameysto oo lagu magacaabo Westgate oo ku yaala bartamaha magaalada Nairobi.
Kenya ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ilaa kun askari oo qeyb ka ah howl galka nabad ilaalinta AMISOM, waxayna meelo ka mid ah Koofurta Soomaaliya kala wareegeen Al-Shabaab.
Soomaalida kunool Xaafada Islii ee Magaalada Niarobi oo saakay wadnaha Farta ku haya iyo ganacsi xaafadaasi oo inta badan..
Wararka aan saakay ka heleyno Xaafada Islii ee Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya ayaa sheegaya in Soomaalida dagan xaafadaasi ay cabsi badan dareemayaan ayna saakay xiran yihiin goobaha ganacsi ee ku yaala Xaafadaasi.
Ganacsatada Soomaalida ayaa ah kuwa hor tuban goobahooda ganacsi walina hadal haya weerarka lagu qaaday Xarunta ganacsi ee kutaala Bartamaha Magaalada nairobi, iyagoona ka cabsi qaba in dad careesan ay waxyeelo u geestaan ganacsatada Soomaalida.
Sheegashada Al-Shabaab ee ku aadan in ay iyagu ka dambeeyeen Weerarka lagu qaaday xarunta ganacsi ee kutaala Magaalada Nairobi ayaa uga dartay xaalada dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Dalka Kenya kuwaa oo ka cabsi qaba in Kenyanku iyaguna beegsadaan.
Soomaalida ku dhaqan Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya ayaa ku jira xaalad feejignaan ah iyagoona wali isha ku haya waxa kasocda Xarunta ganacsi ee kutaala Bartamaha Magaalada Niaarobi halkaas oo wali ay ku jiraan Kooxihii Weerarka geestay.
Weerarka shalay lagu qaaday gudaha Xarunta ganacsi ee kutaala Magaalada Nairobi ayaa noqoneysa weerarkii ugu xumaa ee ka dhaca Gudaha Dalka Kenya marka laga soo tago Weerarkii ka dhacay Nairobi sanadkii 1998-dii.
Wararkii ugu Dambeeyay xarun Ganacsi oo kutaal Nairobi oo wali kacsan iyo Rasaas iyo qaraxyo wali laga maqlayo gudaha Xaruntaasi.
Xaalad ismari waa ayaa wali ka jirta Dhismaha Xarunta Ganacsi ee Westgate oo kutaal Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya halkaas oo maalintii shalay kooxo hubeesan ay gudaha u galeen dad badana ay ku laayeen .
Kooxaha shalay Weerarka ku galay xaruntaasi ganacsi ayaa ilaa haatan ku jira kuwaa oo la rumeesan yahay in tiro dad ah afduub ahaan ugu heestaan gudaha xaruntaasi iyadoona lasoo warinayo in kooxahaasi iminka saaran yihiin dabaqa afaraad ee xaruntaasi.
Rasaas iyo qaraxyo ayaa mararka qaar laga maqlayaa gudaha xaruntaasi iyadoona ciidamo tiro badan oo Kenyan ah iyo Hay’ado sirdoon oo ajaaniib ah ah ay buux dhaafiyeen gudaha xaruntaasi iyo hareeraha kuwaa oo wali ku dadaalaya bad baadinta dadka wali ku jira xaruntaasi iyo sidii kooxaha weerarka geestay loo dili lahaa ama gacanta loogu soo dhigi lahaa.
Meydad iyo dhaawacyo aan tiradooda la heyn ayaa ilaa hada ku jira gudaha Xarunta Westgate ee Magaalada nairobi , kooxaha Hubeesan ayaa mararka qaar soo fasaxaya dad ku jira gudaha xarunta halka kuwa kalana ay toogasho ku wadaan.
Dad ka badan 40-qof ayaa ku dhintay dhaawacana waxa uu ka badan yahay ilaa 150-qof kuwaa oo qaarkood lasoo sheegayo in xaaladooda ay tahay mid halis ah lalana tacaalayo bad baadintooda .
Goob joogayaal kasoo bad baaday Xarunta Weerarka lagu qaaday ayaa sheegay in mar qura xaaladu isbadashay ayna arkayeen qaar kamid ah ragii weerarka geestay oo dharka badalanaya hadana sida dadkii shacabka ahaa oo kale goobta uga sii baxaya.
Madaxweynaha Dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo Khudbad TV-GA uga jeediyay Shacabka Kenya ayaa aad u cambaareeyay falkan ka dhacay Xarunta ganacsi ee kutaala Bartamaha Magaalada Niarobi waxa uuna xusay in dadka ku dhintay a ku jiraan Xubno qoyskiisa ah.
Magaalada Nairobi saakay waxaa ka taagan xaalad aan dagneen waxaana inta badan xiran goobaha ugu muhiimsan ee ganacsi iyadoona ay jiraan cabsi badan oo la xariira weerarkii shalay lagu qaaday Xarunta Ganacsi ee Westgate oo ah xarun ay ka dukaaeestaan dadka maalqabeenada ah.
Daawo Sawirada Xeebta Liido oo laga dhisay Dhismooyin qurux badan kuwa kalana hada laga dhisayo.
Xeebta Liido ee Degmada Cabdi Casiis ayaa hada noqotay mid ilqabad leh soona jiidata dadka damaashaadka iyo dabaasha u yimaada, iyadoona laga hirgaliyay dhismooyin qurux badan mudooyinkii ugu dambeeyay.
Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho waxaa laga dhisay Dhismooyin qurux badan oo u badan Hoteelo iyo Baarar casri waxaa sidoo kale waxaa hada socda dhismayaal badan oo iyana laga hirgalinayo hareeraha xeebta liido.
Inta badan dhismooyinka iyo hormara kasocda waxaa gacanta ku haya Qurbo joog dalka dib ugu soo laabatay kuwaa oo dhismooyin iyo goobo loo soo damaashaad tago ka dhisay xeebta Liido iyo goobaha kale ee ku dhaw dhaw,
Bararka ku yaala Xeebta Liido ayaa ah kuwa habeen iyo maalimba laga heli karo cunooyin casri ah , waxaana dadka inta badan taga xiliyada Habeenkii iyo maalmaha kale aan jimcada aheyn u badan dadka qurbo joogta oo halkaasi isku wareesta.
Al-Shabaab oo la sheegay in ay ku hoolan tahay Helitaanka Hub Kiimiko ah iyo Xog ku aadan arintaasi oo shaaca laga qaaday.
Malaaqyada Digil iyo Mirifle oo ku gacan sayray in ay dowlada soomaaliya la shaqeeyaan
Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaa ka soconayay kulamo xasaasi ah oo udhaxeeyay xildhibaano uu hogaaminayo gudoomiyaha barlamaanka Prof. Jawaari iyo odayaasha beelaha Digil iyo Mirifle.
Kulamadaas ayaa looga gol lahaa sidiii loo dhex dhexaadin lahaa DF Soomaaliya iyo beelaha dega Bay iyo Bakool oo aad isugu khilaafay Aqoonsigii DF ee Maamulka Axmed Madoobe iyo Shirkii Brussles.
Hase ahaatee wadahadal dheer kadib ayaa lasoo sheegayaa inay fashilmeen qorshihii Prof Jawaari, waxaana odayaasha dhaqanka ay balan qaadeen in maamul loo dhan yahay oo Koofur Galbed ah sameynayaan.
Xildhibaan Yacquub Cali oo kamid aha Waftiga Dowlada ee Shirarka la galayeey Malaqyada Digil iyo mirifle ayaa Saxaafada uga Warbixiyeey kulamadii la isku mari wayeey iyo Arimo kale.
“Odayaasha waa diideen dalabkii dowlada, waxaana ay ku adkeysanayaan inay xariirkii ujareen DF ayna maamul goboleedka Koofur Galbeed sameysanayaan” ayuu yiri Xildhibaan Yacquub.
(DHAGAYSO)Wafdi ka socda QM oo manta booqday Kismaayo iyo xafiiskii QM ee Kismaayo oo howlgalaya
War deg deg ah oo goordhow naga soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in halkaas ay gaareen masuuliyiin katirsan Beesha Caalamka
Xubnahana ka socda Beesha Caalamka ayaa kulamo la qaatay Maamulka KMG ah ee Kismaayo iyagoo ka wada hadlay Arimaha Kismaayo iyo sidii xafiis ay uga furan lahayeen magaalada.
Shir Jaraa’id oo maanta oo Sabti ah ku qabtay Magaalada Kismaayo Lataliyaha dhinaca Siyaasada ee Hogaamiyaha Maamulka KMG ah ee Jubba C/qani Jaamac ayu uga warbixiyay Kulamada ay la yeesheen wafdigan ka socday QM gaar ahaan xafiiska u qaabilsan arimaha Siyaasada Soomaaliya ee UNSOM.
RIIX HALKAN: DHAGAYSO CODKA“Arimaha aan ka wada hadalnay waxaa kamid ahaa in si deg deg ah ay xafiis uga furtaan halkan Kismaayo ah” ayuu yiri Sargaalkan Maamulka Jubba uhadlay.
Dhanka kale Magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka soconaya diyaar garow balaaran oo loogu jiro shirka dib uheshiisiinta beelaha ee dhawaan Kismaayo iyo Muqdisho ka dhici doona
In ka badan 25 Ruux oo ku Sumoobay Caano ay ku cabeen Muqdisho iyadoo qaar ka mid ah laga dayrinayo Caafimaadkooda
27-qof oo ka mid ah qoysaska ka tirsan naafada ciidamada xoogga dalka ayaa ku sumoobay caano ay shalay cabeen iyadoo la dhigay isbitaal ku yaalla magaalada Muqdisho si looga daweeyo suntan ay ka qaadeen caanaha.
Dadkan ayaa la sheegay inay ku sumoobeen caano ay ka cabeen goob uu ka jiray Alle-bari, iyagoo mid-mid ay u soo ridday suntan, waxaana xalay loola soo cararay isbitaalka Daarul-shifa halkaasoo lagu daweynayo.
“Shaqsiyaadka ku sumoobay caanaha waxaa ku jira qoys dhan oo hooyo iyo caruur ay dhashay ka koobnaa, waxaana ka mid ahaa cunug yar weli naaska hooyadii nuugayay, kaasoo ay hooyadiis ka mid ahayd dadkii cabay caanaha sumeysan,” ayuu yiri mid ka mid ah qoysaska ku nool isbitaalka Martiini ee magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha degmada Xamar-weyne, Cabdullaahi Sahal Gar-dhuub ayaa sheegay inay gurmad u sameeyeen dadka ku sumoobay caanaha, ayna ka qaadeen goobta ay ku sumoobeen gaadiidka gargaarka deg-degga ah, isagoo xusay in dadka ay mar qura ku dhaceen shuban iyo matag is-wata.
“Dadkan sumoobay waxay u badan yihiin dad danyar ah, waxayna isugu jiraan kuwo waaweyn iyo caruur, inkastoo la daweynayo haddana xaaladda qaarkood ayaa laga dayrinayaa,” ayuu yiri guddoomiyaha degmada Xamar-weyne.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in dadkii cunay raashinka balse aan cabin caanaya ay caafimaad qabaan, halka kuwii caanaha iyo raashinka isla cunay ay ku sumeebeen, isla markaana uu qaarkood ku dhacay shuban iyo matag wada-socda.
Ma ahan markii ugu horreysay oo dad caano cabay ay ku sumoobaan, balse dhowr jeer oo hore ayay dhacday, inkastoo 27-kan qof ee mar qura caano ay cabeen ku sumoobay ay tahay tii ugu badnayd ee Muqdihso ka dhacda.
Daawo Sawirrada:- Madaxweynaha Iyo Wafdigiisa Oo Lagu Soo Dhaweeyay Mareykanka.
Macaamiisha Sharafta leh waxaan halkan idinkugu soo gudbineynaa Sawirada Safarka Madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ay ku marayaan dalka Mareykanka iyadoo halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyay kulamana la qaatay diblomaasiyiin ka tirsan dalkaasi.
Taliska Ciidamada Booliska oo go'aan adag kasoo saaray Jiritaanka Ururka Xizbul Islaam. (Warbixin Xasaasi ah)
Gen.C/risaaq Khaliif Cilmi abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay shirar ay dhawaanahan dambe magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ku qabsanayeen saraakiil ka tirsan ururkii la dhihi jiray Xisbul ISlaam.
Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya (Indho qarsho) ayaa sheegay in aysan dowladda federaalka Soomaaliya aqoonsaneyn urur layiraahdo Xisbul Islaam, wuxuuna uga degey in ay shirara ku qabsadaan magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Sidoo kale abaanduulaha Ciidamada Xoogga wadanka Soomaaliya ayaa tilmaamay in ururkii Xisbul Islaam uu mar ka jiri jiray koonfurta Bartamaha dalka Soomaaliya ayna wanaagsanayd in ay markaas wada hadal la galaan dowladda Kmg ahayd ee xiligaas jirtay, wuxuuna intaas ku daray in aysan hadda maamulin hal degmo oo ka tirsan gobolda dalka Soomaaliya.
C/risaaq Khaliif Cilmi Abaanduulaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku sheegay ururka Xisbul Islaam in uu yahay wax laga soo gudbay ayna wanaagsan tahay in aan dib loogu noqon urur waqtigiisu dhamaaday, iyagoona markii ugu danbaysan ay isku dhiibayeen ururka Alshabaab oo dagaal xoogan kula jira dowlada federaalka Soomaaliya.
Hadalkan Abaanduulaha ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya Gen.C/risaaq Khaliif Cilmi (Indho qarsho ) ayaa imaanaya xilli ay saraakiil ka tirsan ururkii xisbul islaam Shir uga furmay magaalada Muqdisho iyagoo shirkooda ku tilmaamay in uu yahay mid ay uga tashanayaan danaha ururka Xisbul ISlaam iyo sidoo kale xariga hogaamiyihii ururkaas Sheekh Xasan Daahir Aways oo xabsiga ugu jiray dowlada Soomaaliya.
DHACDO XANUUN BADAN:- Haweeney Nolosha ku aastay Canugeeda oo Nool.
Maxkamad ku taala Waqooyiga Magaalladda London ee Dalka Britain ayaa waxaa kasoo hormuuqday Haweeney loo heysto inay dhulka ku aastay Cunugeeda oo nool mudo 2-sano ka hor ah.
Wargeyska The Telegraph ayaa qoray in Xeer ilaalinta Maxkamada Dacwadan qaadeysa loo gudbiyay cadeymo muujinaya in manda Hutton,oo 43 sano jir ah ay dishay wilkeeda.
Wiilka oo da’diisu 4-sano jir aheyd ayaa meydkiisa laga helay qolka jiifka ee hooyada dhashay.
Hutton iyo qareenada Difaacaya ayaa ilaa hada ku doodaya inay been abuur tahay loo dhigay dacwadan islamarkaana qaar kamid qoysaska dariska la ah Haweeneyda eedeysan ay cadeeyeen jiritaanka arinkaas.
Baarayaal Boliska London kamid ah oo guriga manda Hutton,tagay ayaa soo ogaaday qeyb kamid ah dacwada oo ah in cunuga yar la duugay waxaana, markii intaas ay soo baxday kadib ay sheegtay in wiilkeeda uu macluul u geeriyooday.
Dacwad oogayaasha maxkamada London waxyaabaha ay isweydiiyeen waxaa kamid ah “sidee Cunug London ku nool qarnigan uu Macluul ugu dhiman karaa “.
In qofka uu dilo Cunuga uu dhalay Magaalada London waxa ay ka tahay dambi weyn waxaana la sheegayaa hadii Kiiskan lagu helo Hutton inay wajehayeso ugu yaraan 30-sano oo xabsi ah
Madaxweyne Xassan Sheikh oo ku wajahan Dalka Mareykanka. (Waa maxay Ujeedka Socdaalkiisa)
Afhayeenka Madaxweynaha Eng. C/raxmaan Cusmaan Yariisow, ayaa waxa uu ka hadlay Socdaalka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia uu ku gaaray Dalka Mareykanka.
Afhayeenka waxa uu sheegay in Dalkaasi uu Madaxweynaha ka helayn Casuumaad isla markaana la doonaayo inuu kulamo la yeesho Madaxda Dalkaasi si ay uga wada hadlaan Xaaladda iyo Horumarka Somalia.
Sidoo kale waxa uu sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh uu booqanayo Magaalooyinka Ohio, Washington, Minnesota iyo gobolo kale oo Mareykanka ku yaala, wuxuuna afhayeenku intaasi raaciyay in Madaxweyne Xasan Sheekh uu ka qeyb galayo casho sharaf uu sameynayo Madaxweynaha Mareykanka Brack Obama iyo ergada ka qeyb galeysa shirweynaha Q/Midoobay oo sanadkiiba mar la qabto.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbado kala duwan u jeedinaya jaaliyadaha Soomaalida ee wadanka Mareykanka ku nool, isagoona uga warbixinaya waxqabadka Dowladiisa tan iyo markii loo doortay xilkaasi iyo baaqyo uu u jeedinayo jaaliyadaha Soomaalida Mareykanka.
Ugu dambeyntii, Xog hoose ayaa waxa ay sheegeysaa in Madaxweynaha uu Halkaasi kula kulmi doono Ra'isul wasaarihi hore ee Somalia C/llahi Farmoojo oo la filaayo inuu u soo bandhigi doono wada shaqeyn dhex marta.
Wararkii Ugu Dambeeyay Dhaq dhaqaaqa Siyaasadeed ee Baydhabo ay buux dhaafiyeen Masuuliyiinta Dowlada ugu jira Digil iyo Mirifle.
Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa saakay ah mid jawi siyaasadeed oo sidii hore ka badalan laga dareemayo, waxaana maalintii shalay Magaaladaasi gaaray in kabadan 50-Xildhibaan uu Hogaaminayay Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya kuwaa oo dhamaan kasoo jeeda Beelaha Digil iyo Mirifle.
Baydhabo waxaa saaka kasoconaya Kulamo xasaasi ah ay yeelanayaan Masuuliyiintii shalay tagtay Magaaladaasi ,Odayaasha dhaqanka Beelaha Digil iyo Mirifle , Siyaasiyiin iyo Qeybaha kala duwan ee Bulshada, kulamadan ayaa ah kuwa diirada lagu saarayo sidii deegaanada ay Beelahaasi dagaan loogu sameyn lahaa Maamul Goboleed.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof Jawaari ayaa hormuud u ah kulamadan saakay kasoconaya Magaalada Baydhabo ee diirada lagu saarayo sida Gobolada Baay , Bakool iyo Sh/Hoose loogu dhisi lahaa Maamul goboleed sidoo kale looga soo horjeesan lahaa Maamulka Jubba uu Sheekh Axmed Madoobe Hogaamiyo Dowladana dhawaan aqoonsatay.
Magaalada Baydhabo saaka waxaa kusugan inta badan Masuuliyiinta Dowlada ugu jira Beelaha Digil iyo Mirifle sida Gudoomiyaha Baarlamaanka , Wasiir kuxigeeno iyo Xildhibaano kabadan 50-Xildhibaan , Xubnaha aan wali gaarin Baydhabo kana soo jeeda Beelaha Digil iyo Mirifle waxaa kamid ah Wasiirka Gaashaandhiga Soomalaiya oo safar ku wehliya Madaxweynaha Soomaaliya oo hada kusugan Dalka Talyaaniga.
Odayaasha Dhaqanka Beelaha Digil iyo Mirifle ayaa maalin kahor ku amray Xubnaha Dowlada ugu jira in labo maalin Gudahood Baydhabo kuyimaadaan , waxaana amarkaasi durba qaatay inta badan Xubnaha Beelaha digil iyo Mirife Dowlada ugu jira uu Hogaamiyo Prof Jwaarai kuwaa oo shalay diyaarad qaas ah Muqdisho ka qaatay kana dagay Baydhabo.